ဇော်ထွဋ် - ကိုယ်ပျောက်ရန်သူ သို့မဟုတ် ကိုးဗစ်၁၉တစ္ဆေကို တွန်းလှန်ခြင်း - MoeMaKa Media
Home / Community / Coronavirus / Experience / Zaw Htut / ဇော်ထွဋ် - ကိုယ်ပျောက်ရန်သူ သို့မဟုတ် ကိုးဗစ်၁၉တစ္ဆေကို တွန်းလှန်ခြင်း
ဇော်ထွဋ် - ကိုယ်ပျောက်ရန်သူ သို့မဟုတ် ကိုးဗစ်၁၉တစ္ဆေကို တွန်းလှန်ခြင်း
Community, Coronavirus, Experience, Zaw Htut
Photo -7Day News Journal Cover
၂၀၂၀ နှစ်ဦးမှာ သူရောက်လာသည်။ တရုတ်က လာသည်။ ဝူဟန်က လာသည်။ လင်းနို့ကပဲ ကူးသလိုလို၊ လူကပဲ ဖန်တီးသလိုလို အငြင်းပွားနေသည်။ ရောဂါပိုးမွှားလို့သာ ပြောဆိုနေကြသည်။ တကယ်က သက်မဲ့ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ သက်မဲ့ကလည်း အသစ်အဆန်းဖြစ်သည်။ပွားများတတ်သေးသည်။ ကူးလူးတတ်သေးသည်။မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲတတ်သေးသည်။ သူက တစေ ္ဆလို၊ သရဲလို ကြောက်စရာကောင်းသည်။ အသက်ကိုပင် အန္တရာယ်ပေးတတ်သေးသည်။ မမြင်နိုင်သောရန်သူ (invisible enemy.)၊ ဒါမှမဟုတ်..ကိုယ်ပျောက်မိစ္ဆာများ ဖြစ်ကြသည်။
ဒီကိုယ်ပျောက်မိစ္ဆာတွေ..လာတဲ့အရပ်တော့ သိပါပြီ။ သူတို့ ဘယ်ကိုသွားမှာလဲ.. ဘယ်မှာနေမှာလဲ.။ဘယ်လောက်ကြာကြာနေမှာလဲ..။. ။ ပြောရခက်ချည်းဖြစ်နေသည်။ တရုတ်ကနေ ဟိုး..ဥရောပ ရောက်သွားသည်။ လက်တင်အမေရီကား ခရီးနှင်သည်။ ပထမလှိုင်းတုန်းက အင်းစိန်က ပြန့်ပွားရာ ဗဟိုချက်မ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ အခု..ဒုတိယလှိုင်းမှာ စစ်တွေက အပူမီးပွား ပွားလာသည်။ ရန်ကုန်မှာ လှိုင်းထန်နေသည်။ခက်တာက ဆေးဝိဇ္ဇာ ကိုင်တွယ်ကုသရမယ့် ဆေးတောင့်က မပေါ်ပေါက်သေးတာပဲ ဖြစ်သည်။ လက်လှမ်းမီရာ ဆေးဝါးများဖြင့် ကိုးဗစ်တစ္ဆေကို နိုင်နင်းတာလည်း အများအပြားရှိခဲ့သည်။
ရောဂါပိုးရှိသူထံမှ နီးနီးကပ်ကပ် သွားလာခဲ့ဖူးသူထံသို့ ကူးဆက်သွားသည်ဟုဆိုသည်။
ဥပမာ..ဘတ်စကား၊ မီးရထား အတူစီးနင်းတာမျိုး ဖြစ်နိုင်သည်။သို့သော်..ထိတွေ့မှုမရှိပဲ၊ ခရီးသွားရာဇဝင် မရှိပဲ၊ ပိုးတွေ့ရတာက ရှိသေးသည်။ သို့မဟုတ်..ရောဂါလက္ခဏာတွေ ပြသူက ပြနေသည်ဟု ကြားရပြန်သေးသည်။ လူလူချင်းသွားရင်းလာရင်းမှ ကူးစက်နိုင်သလို၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း ထိတွေ့မှုမှလည်း ကူးစက်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပြန်သည်။အဲဒါက..အလွန်စိုးရိမ်ရဖွယ်ဖြစ်သည်။ လူတိုင်း ကိုင်တွယ်သုံးစွဲနေရသော ငွေစက္ကူမှလည်း ကူးစက်နိုင်သည့်သဘောဖြစ်သည်။ ကူးစက်မှု အများဆုံးနေရာ သက်သေများကတော့...
လေအေးပေးစက် အသုံးပြုထားသော လူစုလူဝေးနေရာ အခင်းအကျင်း..night club ,KTV ,ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ..အဆောက်အအုံအတွင်းမှ ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။
ရောဂါပိုး ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုဟာ လေထုထဲမှ ဖြစ်နိုင်တယ်ဟု ပြောတာတွေလည်း ရှိသေးသည်။ သြကာသလောကကြီးမှာ.. လေထုထဲက အမှုန်အမွှားတွေက အိမ်တွင်း အိမ်ပြင်၊ ရုံးတွင်းရုံးပြင် အကုန်အဆက်အစပ် ဖြစ်နေသည်။ ဒါကြောင့်ပင်..အိမ်ထဲမှာနေကြဖို့၊ အရေးတကြီးကိစ္စ မရှိလျှင် အိမ်ပြင်မထွက်ကြဖို့၊ stay at home တိုက်တွန်းတာ ဖြစ်နိုင်သည်။ အလုံခြုံဆုံး အရပ်က အမေ့အိမ်၊ ကိုယ့်အိမ်ပဲ ဖြစ်မည်။
` အိမ်မှာ နေထိုင်ကြပါ´..ထိုကိစ္စကလည်း ပြောရခက်ကြီး ဖြစ်သည်။ ဆိုက်ကားဆရာ၊ ကားဆရာ၊ မုန့်သည်၊ခေါင်းရွက်ဗျတ်ထိုး ဈေးသည်၊ ကွမ်းယာသည်၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သား၊ နေ့စားအလုပ်သမား..တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့၊ ပါးစပ် လှုပ်ရတာတွေ၊ အသက်ရှင် ရပ်တည်ရတာတွေ (existence) ရှိသေးသည်။ တစ်နည်း.. မခြွင်းမချန်ပြောရလျှင် အသက်ဆက် ကျန်ရစ်ဖို့၊ (survive) ဖြစ်ဖို့လိုပါသည်။သည့်အတွက် စားနိုင်သောက်နိုင် လူများကဲ့သို့ အိမ်တွင်းအောင်းနေလို့ မဖြစ်ပါ။တစ်ဝမ်းတစ်ခါးအတွက် မဖြစ်မနေ အိမ်မှ ထွက်ရပါသည်။ မဖြစ်မနေ ဘတ်စကား၊ မီးရထားစီးရပါသည်။ လူအများနှင့်မထိချင်သော်လည်း ထိတွေ့ရပါသည်။ ထိုသူတွေထဲမှာ ဆေးဖက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများလည်း မဖြစ်မနေ ပါဝင်နေရပါသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ..တာဝန်အရဖြစ်စေ၊ ဝမ်းရေးအရဖြစ်စေ၊ကျန်းမာရေးအရဖြစ်စေ.. အိမ်ပြင်ပသို့ မဖြစ်မနေ ထွက်နေရသူတွေလည်း ရှိနေပါသေးသည်။ ကိုယ်တွေလည်း ကျန်းမာရေး၊ စားရေးသောက်ရေး ပေါ်လာလျှင် အရေးပေါ် ထွက်ရတာတွေရှိသည်။
အယူအဆကို တင်ပြပါသည်။ ကွင်းပိတ်ကန်လျှင် လက်လုပ်လက်စားများအတွက် ၂ပတ်တန်သည်၊ တစ်လတန်သည် စားစရိတ်ထောက်ပံ့ငွေ(သို့) စားနပ် ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ဖို့လိုပေဦးမည်။သို့ဆိုလျှင်..ဂျပန်လို
ဖွင့်ကန်မှာလား..။ဖွင့်ကန်ပါက ကူးစက်နှုန်းအလွန် မြင့်မားလာလျှင် ဘယ်လိုကုစားမှာလဲ..စဉ်းစားစရာ ဖြစ်သည်။
မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကတော့..ဒီရောဂါဟာ..တုပ် ကွေးအကြီးစားဖြစ်တယ်။ အထူးဂရုစိုက်ရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် သိပ်ပြီးမကြောက်င်္ရွံ့ကြဖို့ မလိုအပ်ကြောင်း အားပေးထားသည်။ အခြား မိတ်ဆွေကတော့ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် သာမန်တုပ်ကွေးထက် ပိုမိုပြင်းထန်သော အဆုတ်ရောင်ရောဂါ သဘောဖြစ်နေသဖြင့် အထူးအရေးကြီးနေကြောင်း သတိပေးပြောကြား ထားသည်။အားလုံးက အမေရီကန်၊ အိန္ဒိယ၊ ဘရာဇီးလ်၊ ..တို့ကဲ့သို့ ကူးစက်နှုန်းမြင့်မားမှာ စိုးရိမ်နေကြပုံက အတူတူပင် ဖြစ်သည်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်..မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စေတနာစကားက အင်အားတစ်ရပ် ဖြစ်ရပါသည်။
လူတွေက အကြောက်တရားနဲ့ မွေးဖွားလာတာ ဖြစ်သည်။ `သဘာဝ´ကြီးထဲမှာနေထိုင်ပြီး၊ ကမ္ဘာဦးကတည်း က ရေကြီးမှာ ကြောက်၊ မိုးကြိုးပစ်မှာကြောက်၊ မိုးကြီးမှာကြောက်၊ လေထန်မှာကြောက်၊ ငလျင်လှုပ်မှာကြောက်၊ သားရဲတိရစ္ဆာန် ဘေးရန်ကြောက်..။
ဒါနဲ့..ဝသုန်မြေကြီး ကိုးကွယ်၊ လနတ်သားကိုးကွယ်၊ လေနတ်သားကိုးကွယ်၊ နေနတ်သားကိုးကွယ်။ ပိရမစ်ကြီးတွေပင် နေဘုရားရဲ့ အထိမ်းအမှတ်ဟု ဆိုသေးသည်။ နိုင်းမြစ်သည်လည်း အီဂျစ်တို့ကိုးကွယ် ပူဇော်ရာ တန်ခိုးကြီး ဘုရ ားတစ်ဆူ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပြီးတော့..အီဂျစ်ဘုရား အများအပြားက လူ့ပြည်လူ့ရွာမှာ တိရစ္ဆာန်အသွင်နေတတ်သည်ဟု ယူဆကာ၊ ဘုရားရဲ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် တိရစ္ဆာန်ပုံတွေ ထုဆစ်ထားကြသေးသည်။ သူ့ခေတ်သူ့အခါ..ဉာဏ်မီသလောက် အကာအကွယ်ယူခြင်းဖြစ်သည်။
လူ့ဘဝက ` ဒုလ္လဘ´ရခဲလှစွာဟု ဆိုမိန့်ကြသည်။
ကိုယ်ကတော့..ဒီဘဝကို ခုံမင်သည်။ ခင်တွယ်သည်။
ဗိသုကာဟန်ပန် အရွဲ့အစောင်းတွေနဲ့ အိမ်တစ်လုံးဖန်တီး တည်ဆောက်လို့ရတာ ဤလူ့ရွာမှာပဲ ရှိသည်။ပြီးတော့..စိတ်ကူးပေါ်လျှင်ပေါ်သလို ကဗျာတွေ စာတွေ ရေးဖွဲ့သီကုံးလို့ ရသေးသည်။
ဒီလို..ကိုးဗစ်အကြပ်အတည်းကာလမှာ လက်တစ်ဖက်က မအိမ်သူရဲ့ ကျန်းမာရေးကို စောင့်ရှောက်၊ လက်တစ်ဖက်က ကဗျာရေး စာရေး..။
ဒီလောက်ပဲ..လုပ်ကိုင်ခွင့် ရသည်။လုပ်ငန်းကိုင်ငန်း လုပ်ဖို့ရယ်က ခပ်ခက်ခက်ရယ်..။
(၆) ကိုးဗစ်၁၉တစ္ဆေလှိုင်းဟာ..ကိုယ်တို့ရဲ့ဘဝရှင်သန်ခြင်းကမ်းပါးကို ရိုက်ခတ်လာနေပါပြီ။ ကမ္ဘာဦးကလိုတော့..နေနတ်သားကိုးကွယ်။ လနတ်သားကိုးကွယ်ဖို့လိုမယ် မထင်လှပါ။
ကုသရန်ဆေးဝါးပေါ်ပေါက်သည်ဖြစ်စေ၊ မပေါ်ပေါက်သေးသည်ဖြစ်စေ..ခန္ဓာကိုယ်ကို ဒုက္ခ မပေးရန် ကိုယ်ပျောက်ရန်သူကို တိုက်ထုတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ တိုက်ထုတ်နိုင်ရန်
ကိုယ့်မှာလည်း အတွင်းအားလိုသည်။ ကိုယ်ခံအား ကောင်းရန်၊ မြှင့်တင်ထားရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။
အချို့သယံဇာတက တွင်းနက်နက် တူးစရာမလိုပါ။
လွယ်လင့်တကူ အဆင်သင့် ခူးစားခပ်စားရပါသည်။
သဘာဝက စားစရာ သစ်ဥသစ်ဖုတွေပေးထားသည်။
သဘာဝက ကုသစရာ ဆေးဝါးအချို့ ပေးထားသည်။
သဘာဝက ခံစားစရာ နှလုံးသား ပေးထားသည်။
သဘာဝက ဆင်ခြင်နိုင်ရန် ဦးနှောက် ပေးထားသည်။
ဇော်ထွဋ် - ကိုယ်ပျောက်ရန်သူ သို့မဟုတ် ကိုးဗစ်၁၉တစ္ဆေကို တွန်းလှန်ခြင်း Reviewed by MoeMaKa on 7:22 AM Rating: 5